လုပ်ဂျဘာ လုပ်ဂျဘာ တော်ဒို့ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » လုပ်ဂျဘာ လုပ်ဂျဘာ တော်ဒို့
လုပ်ဂျဘာ လုပ်ဂျဘာ တော်ဒို့
Posted by မိုက်ကယ်ဂျော်နီအောင်ပု on Nov 30, 2011 in Copy/Paste | 15 comments
ဘာရယ်တော့ဟုတ်ပါဘူး သဂျီးမင်းတရားကြီးရဲ့ဘောတော်အတိုင်း သများနဲ့မတူအောင် မာမီက ရေးခြင်ပေမယ့်
မာမီက ဟိုလိုဖြစ်သင့်တယ် ဒီလိုဖြစ်သင့်တယ် ပြောရတာ သိပ်ဝါသနာ မထုံဘူး
ပိုဆိုးတာက မာမီက စာရေးတာ လုံးဝ လုံးဝ မဝါသနာဘူး
ခုဆို နှစ်လလောက်တောင် ရှိဘီ ပို့စ်ဒိုင်းဂို မဖတ်ဖြစ်ဘူး ( ဖတ်ဂို……မဖတ်ဒါ )
ခုဒေါ့ မာမီလိုခြင်ဒဲ့ ပို့စ်ဒွေ မတက်လာလို့ မာမီဂ ဖိတ်ခေါ်ဒါ ဖိတ်ခေါ်ဒါ
ဆင်ပိန်ရင်ကျွဲဝတာလောက် ကျန်တယ်ဆိုပြီး အထယ်ကြီးပျက် သဂျီးတို့ သောက်မျိုး အဖွားဂျီး တစ်ယောက်
နေဗျည်ဒေါ်ကိုလာဒဲ့အချိန်မာ ဆင်ဖြူဓေါ် သားသားလေးဒဂေါင်မွေးဒယ်
သူ့ဟာသူ မွဲလို့ ဘဝပျက်တော့မှာကို တိုက်က ပျက်နေဘီ ဆိုက်မပျက်တဲ့ အမေဂျီးကန်နဲ့
မုဆိုးမတစ်လင်ကွာ ကြွေးတင်ကုန်ရှုံးလင်ဆုံးသားသေ လိုတာမရတော့
ဗမာပြည် ( တိုင်းရင်းသားတွေ မြောင်းထဲနေ ) မှာ
လွှတ်တော်ထဲ ဝင်ခြင်သူများ နောက်ထပ်သုံးလစာ ငပိ ငါးခြောက် ငံပြာရည် များစုစောင်း၍
မိမိ၏ အသက်ဇီဝကို စောင့်ရှောက်ကြကုန်လော
နောက်ထပ် သုံးလ တိုင်သည့်တိုင်အောင် ကြားကား ဟုတ်ပါဘူးယောင်လို့
ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ ဖြစ်အုန်းမည် မဟုတ်ဘာဂျောင်း နှင့်
အောက်ပါ ဓာတ်ပုံပါ အရှည် သုံးပေ လေးလက္မရှိ တောက်ဖွတ်အား ဈေးအကောင်းဆုံးပေးနိုင်သူကို
ရောင်းချမည်ဖြစ်ပြီး မည်သူမှ မဝယ်ဘာဂ သတ္တဝါအသက် လူချွတ်မှ ကျွတ်မည်ဟူသော မူကို လက်ကိုင်ထား၍
မီးဖုတ်မီး ယမကာနှင့် အမြည်းလုပ်ပြစ်မည်ဖြစ်ဘာဂျောင်း
လိင်တူချစ်သူ ဆန့်ကျင်သူ ကမ္ဘာ့ရန်သူ စင်္ကြာဝဠာ့ ရန်သူ
ပုပု ရေ. …. အဲဒိဖွတ် မြည်းမှာဖြင့်မြန်မြန်လုပ် …….တော်ကြာရေထဲဆင်းသွားလို့………. ဖွတ်-မိချောင်းဖြစ် မြစ် နားမချးသာဆိုလား………… အဲဂလို ဖြစ်ကုန်မှဖြင့်………………
အဲဒီကောင်သာ တောက်တဲ့ ဆိုလို့ကတော့ ကွာ
ဂျော်လကီအောင်ပုတို့ အလန်းလေးတွေ အငယ်လေးတွေကို
အငယ်လေးတွေက ရေဖျန်းမှ လန်းတာလေ
ဟင်းးး လူကြီး သူက အကုန်သိနေလိုက်ပီ…..။ အင်းပေါ့လေ…..မန်ဒလေးလိုမြို့ကြီးမှာနေတာဆိုတော့ စမောလေးဘာလေးဆွဲစားချင်စားနေမှာပေါ့…………။ အဲကောင်က ရေစပ်နားမှာဆိုတော့ တောက်တဲ့တော့ မဖြစ်နိုင်ဘူး…..။ တောက်တဲ့ ဆိုရင်လည်း ပုပုတို့ ကလူတစ်ကာ့ထုတ်ပြနေမှာမဟုတ်ဘူး…။ သူ့ဖာသူ တိတ်တိတ်လေး ရောင်းစားမှာ သေချာတယ်…။
ကျုပ်တို့က..တောက်တဲ့တို့.. ဖွတ်တို့လုပ်နေချိန်.. ဟိုက.. အာကာသထဲ..လူနေနိုင်ဖို့စမ်းနေကြပြီ..။
လောလောဆယ်တော့ ..ရေထဲကသံကောင်က..အာကာသထဲ နေနိုင်တယ်ဆိုလားပဲ…
စတီဗင်ဟော့ကင်းက.. လူသားက..နောင်အနှစ်၁၀၀၀ ဒီကမ္ဘာမြေမှာ နေနိုင်ကြဖို့အခြေအနေသိပ်မကောင်းဘူး ဆိုထားတာမို့တဲ့လေ..။
နတ်ပြည်တက်နေနိုင်တဲ့ နည်းလမ်း.. ဒို့ဗမာတွေ.. ဒီလောက်ပြထားတာကို..မလုပ်ပဲ.. ဘာတွေလုပ်နေမှန်းမသိ…
Nova မှာကြည့်ရတယ်။ အဲဒီအကောင်လေးတွေက အပူအအေးဒဏ်ခံနိုင်တယ်၊ လေမရှိတဲ့(လေဟာပြင်) မှာလဲ အကြာကြီးနေနိုင်တယ်။
ဓဂြီးပျောဒါ ကောင်းဒေါ့မယ်ဓဲ့။ သူမှမ်းလိုက်ယင် လွဲဒါချီးပဲ။ နိုင်ငံယေးအကျင်းသားတွေဒုံးကလဲ နှစ်ခါမှမ်းဒါ နှစ်ခါဆလုံးလွဲဒယ်။ ပဌမတခါဂ ငါးယာလွတ်မယ်မှမ်းပီး သုံးယာဘဲလွတ်ဒယ်၊ ဓုတိရတခါကျဒေါ့ တရောက်မှမလွတ်ဗူး။။။။။ နောတ်တခါ သူပျောယင် ပျောင်းပျံရူယမယ်။။။။။
တော်တို့ မလုပ်ရင်တော့ ကျုပ်တက်လုပ်မှာ……(သမဒ လုပ်မှာကိုပြောဒါ)
ဦးလေး အောင်ပု ဗမာပြည်ဟုတ်ဘူးလေ မြန်မာပြည် ပါ ဗျ ဦးလေးကလဲသွေးခွဲနေသလိုဖြစ်နေတယ်ဗျ
ဒီမှာတော့ တောက်တဲ့တစ်ကောင် ရဖို့ အသည်းအသန်ရှာနေကြ
ထွန်းထားတဲ့မီးတွေ ထိန်ထိန်ကိုလင်းလို့ ။မဆိုးဘူးဗျ
ခုမှ တောတောင်ထဲ မီးရတော့တယ်။
ခုမှ မာမီဂ ဂဏန်းပေးဒယ်ဆိုဒေါ့
နိုင်ဂံရေးဒွေဒေါ့ နားမလယ်ဘူးဝေ့ ;)
ပွဲလန့်တုန်းက —- ဖျာခင်းမလို့ကြံတယ် အဲ ဟယ် အဲ ဟယ်၊
သူ ကျမကိုချစ်တယ် မေတ္တာနေရာပေးကွယ်၊
သက်သက်ညှာညှာပြောလိုက်မယ် ၊ ကျမှာချစ်သူရှိတယ် ရှင်ငရဲကြီးလိပ်မယ် ကွဲ အယ် ကွဲအယ်။
ခုတော့လေ တို့ ပြည်ကြီးကအဲလိုမဟုတ်တော့ဘူး၊ခေတ်မှီတွားဗီ၊ လည်တွားပြီ ဆိုတော့ အဲ မျက်နှာများ တတ်သူ ဖစ်ပြီ ဆိုပြီး၊အဲဒါ မေရိဂါးကြီးက ရည်းစားစကားလာကြောဒါ ဖစ်မှာပေါ့ ။
အနော်တွေးတာ လိုတွားရင်လည်း –ခွေးလွှတ် အဲ ခွင့်လွှတ်နော် ။
ရည်စားတစ်ထောင်လင်ကောင်တစ်ယောက် ဆိုတော့ တွေ့ဗာဂျေ တွေ့ဗာဂျေ နော် ကိုကို ဘုဂျီး။
အိုင်ပီအောင်ပု၊မာမီအောင်ပု၊ပုပု၊ဂျော်လကီအောင်ပု၊ဂျော်နီအောင်ပု ငါးမည်ရ အောင်ပု ရေ…
တောက်တဲ့အကြောင်း ကျုပ်ရေးမလိုလုပ်နေတုန်း ခင်ဗျားက ဦးသွားသကိုးဗျ….။
တောက်တဲ့ဆိုတဲ့အသံ ကြားကိုမကြားချင်ဘူး….အရင်က ကိုယ့်အိမ်ခေါင်မိုးပေါ် မှာ အဲဒီလို သိန်းသန်းချီတဲ့ ငွေထုတ်တွေကို ဘာကြောင့် သတ်မိလဲဆိုတာ တွေးမိတိုင်းရင်နာတယ်။
အမေဂျိက ကို “မားသား”ခေါ်မယ် ..ဒါဗျဲ
ဘာကျောကျော ဖွတ် မီးကင်မယ်ဆိုပြောနော် ကိုကိုပု ထန်းရည်ပုလင်းဆွဲလာခဲ့မယ်…အနော်ကြိုက်တယ်ဂျ
ကျုပ်တို့ ဖွတ်တက်မှာတော့ အဟုတ်ပါဝူးနော်……